11 KULUL: Ka bogo safka & shaxda ay JUVE lasoo shirtegi doonto! | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha 11 KULUL: Ka bogo safka & shaxda ay JUVE lasoo shirtegi doonto!
11 KULUL: Ka bogo safka & shaxda ay JUVE lasoo shirtegi doonto!
(Torino) 17 Luulyo 2018 – Kooxda Juventus ayaa shalay soo bandhigtay laacibka adduunka ee CR7 kaasoo fasallada soo aadan u safan doona kooxda Juventus oo Real Madrid uga soo qaadatay 112 milyan oo euro.
Haddaba, maxay noqon doontaa shaxda kooxda Juve oo sidoo kale fasalkan iska adkaysay meelo ka mid ah waaxaha khadka dhexe, daafaca iyo xitaa goolka ee aynu eegno shaxda ay lasoo shirtegi karto fasalkan 2018-19.
Previous articleXOG: AC Milan oo isbeddel dhanka maamulka ah samaynaysa (Laacibiin imanaysa & kuwo socda)
Next articleDHIIG-MIIRAD: Hannaanka ay ku shaqeeyaan bankiyada Somalia ku yaalla oo laga dayriyay!